संवाद - Lumbini Times
म पूर्णकालीन व्यवसायी थिएँ । अहिले म राजनीतिमा आएको छु । जसरी नेपालकै वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चौधरीज्यू, राजनीतिमा अब उद्योगी व्यवसायीहरु पनि लाग्नुपर्छ र देशको विकासका लागि, देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ भनेर आउनुभएको छ, त्यसैगरी म पनि मेरो क्षेत्रको विकासका लागि खटिनुपर्छ र आफै लाग्नुपर्छ भनेरै राजनीतिमा आएको हुँ । मैले यति धेरै वर्ष बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा रहेर विकासका क्षेत्रमा जे जति भूमिका निर्वाह गरेँ, जे जसरी आफुले सकेको योगदान दिएँ, त्यसलाई अझै मलजल गर्नका लागि सक्रिय रुपमै राजनीति गर्नुपर्छ र बुटवल क्षेत्रको विकासका लागि लाग्नुपर्छ भनेर आएको हुँ । मैले सुन्छु, राजनीति धेरै भ्रष्ट, धेरै अनावश्यक चलखेल गर्ने, आफ्ना मान्छेहरुलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बन्यो जस्ता कुराहरु । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।
जनताले मुद्धा बिषय र पार्टीका निति तथा कार्यक्रम हेर्छन । २०४८ सालमा बालकृष्ण खाँणले यहि क्षेत्रबाट जित्नुभाको हो । त्यसपछि बुटवलमा सूर्यप्रसाद प्रधानले पनी जित्नुभएको हो । पछिल्ला केहि बर्षयता विष्णु पौडेलले जित्नुभएको हो । तर सधैभरी एउटै व्यक्ति र पार्टीले जित्छ भन्ने हुँदैन । अहिले अब हार्ने पालो विष्णु पौडेलको हो । अब जनताले लोकतान्त्रिक पार्टीलाई रोज्छन् ।
‘लघुवित्त कम्पनीहरुको स्प्रेडदरमा पुर्नविचार होस’
पुर्वाञ्चल ग्रामिण बिकास बैंक, मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंक र सुदुर पश्चिामाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकहरु एक आपसमा गाभिएर बनेको नेपाल गा्रमिण विकास बैंक लिमिटेडको हालैमात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट अवकाश लिएका धर्मराज पाण्डे नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघको अध्यक्ष पनि हुन् । चालुवर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि खासगरी लघुबित्त […]
मोहन वैद्य किरण उमेरले ७० को नजिक पुगेका छन् । राणाकाल, पञ्चायत, शाहवंश र गणतन्त्रको अनुभव गरेका उनी अहिले नव जनवादी क्रान्ति आवश्यक छ भन्दै त्यसको तयारीमा लागेका बताउँछन् ।
नारायणमान बिजुक्छे नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का अध्यक्ष हुन् । सरकारमा नजाने तर सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्दै उनको पार्टीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।
नवलपरासीदेखि पोखरासम्मको बेल्ट चट्याङका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्र
विशेषगरी नेपालको दक्षिणपूर्वी भेग झापा र चुरे क्षेत्रमा असाध्यै धेरै चट्याङ पर्ने गरेको छ। त्यसबाहेक नवलपरासीको नारायणी बेल्टदेखि पोखरासम्मको क्षेत्रपनि चट्याङको लागि पकेट क्षेत्र जस्तै हो।
अफ द फिल्ड हाम्रो धेरै समस्या भयो : भावना
भावना घिमिरे २०७१ को कात्तिकमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुपमा नियुक्त भएकी हुन् । त्यसयता उनले झण्डै २१ महिना क्यानको सिइओका रुपमा काम गरिन् । उनले क्रिकेट संघका काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दैं पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
सरकारसँग संयुक्त संयन्त्र बनाएर काम गर्न चाहन्छौंः अर्याल
हालै बुटवलमा सम्पन्न नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशनबाट बुटवलका व्यवसायी हरि अर्याल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन । २०२६ सालमा गुल्मीको सिर्सेनीमा जन्मिएका अर्याल संयोगले पुस्तक व्यवसायमा हात हालेका हुन । जन्मथलोमै विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरी काठमाडौंको रत्न राज्यलक्ष्मीबाट २०४७ मा आइए तह पूरा गरेका अर्याल त्यसपछि बुटवलमा आए । बुटवलमा नगरपालिकामा मुखियाको जागिर शुरु गरेका उनी २०५६ मा बाध्यात्मक अवकाश भयो ।
अन्तर्वार्ता: नयाँ युगको अगुवाई गर्न नयाँ शक्ति : डा. भट्टराई
मुख्य कुरा आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति दुईवटा कुरा नेपालमा आवश्यक छ । पहिलो कुरा त यसको राष्ट्रिय रुपले आन्तरिक रुपमा एकता कायम गर्ने र एउटा दिगो शान्ति कायम गर्ने र स्थायित्व कायम गर्ने नै हो । त्यसको जगमा मात्रै तीव्र आर्थिक विकास हुन सक्छ । यसको निम्ती नेपालको जुन एउटा जातीय बनोट छ जसमा खस, आर्य, मधेशी, थारु र आदिवासी जनजाति लगायत छन् यी सबै जाति र समुदायहरुलाई एकतावद्ध गरेर लैजाने नीति हामीले अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
कुपोषण न्यूनीकरण मुख्य चुनौती : अधिकारी
पोषणको अवस्था कमजोर भएका कारण कपिलवस्तु जिल्लामा कुपोषणको भयावह अवस्था देखिएको छ । पोषणको अवस्था सुधार गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्ला तह देखि गाउं तह सम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत पोषण सम्वन्धि विविध गतिविधी तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
मुख्य चुनौती संविधान कार्यान्वयन
सकेसम्म सबै पक्षलाई सहमति र सहकार्यबाट अघि बढाउने मेरो प्रयास हुनेछ। किनभने संविधान घोषणा भइसकेपछि रूपान्तरित संसद् छ, मुख्य चुनौती संविधान कार्यान्वयनको हो। सबै कुरामा राजनीतिक दल एक भएर अघि नबढे मुलुककै लागि झ्न चुनौती थपिने छ।
नयाँ शक्तिको लक्ष्य मुलुक समृद्ध बनाउनु हो –भट्टराई
यहाँ कुरा भावनात्मक हैन । यो त विचार र विज्ञानको कुरा हो । नयाँ युग वदलिएपछि त्यो युगको आवश्कता पुर्ती गर्ने किसीमले काम गर्नुपर्छ । ति साथीहरुलाई अलिकति नयाँ युगमा प्रवेश गर्न अलिकति कठिनाई भैरहेको छ ।
‘मोदीजीले नबोलेसम्म केही भन्ने अवस्था छैन’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नबोलेसम्म केही भन्ने अवस्था छैन । म त्यो शब्द व्यक्त गर्दिनँ । आपसी समझदारीमा केही समस्या पक्कै भएको हो । उहाँहरूको भूमिकामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर नै हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ । आशा गरौँ केही दिनमा सबै समस्याको समाधान हुन्छ ।
भारतसँग भन्दै आएका छौं हामी यस म्यान हुन सक्दैनौं : प्रचण्ड
प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ : नेम्वाङ
नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक जनताको ६५ वर्ष पुरानो चाहना र भावनाअनुरूप संविधान बनेको छ । सोझै जनताको मतमा प्रतिनिधिहरूको हातबाट संविधान बनेको छ ।
बाहुनवादबारे डोरबहादुर विष्टको धारणा (अन्तरवार्ता)
बाहुनहरूले कहिल्यै परिस्कृत कुरा गरेनन् । सधैं मलाई दान देऊ, तिमी बैकुण्ठ जान्छौ भन्ने मिथ्या प्रचार गरिरहे । बैकुण्ठ छ भन्ने विश्वास भएको भए ती बाहुनहरू आफैं जान्थे । भाग्यवादले गर्दा हामी पौरखशून्य भयौं । बाहुनवादले मानिसको प्रतिभालाई कुण्ठित बनाइदियो ।
१९५०को नेपाल–भारत सम्झौता एकतर्फी छ : दाहाल
सन् १९५० मा भएको सम्झौता एकतर्फी छ । सन् १९५० मा भएको यो सम्झौता राणा कालमा भएको थियो । हामी यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौं । तर भारतले यो सम्झौता आफू एक्लैले अन्त्य गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ । यसलाई दुबै पक्ष मिलेर अन्त्य गर्नु पर्दछ । यस विषयमा हाम्रो छलफल जारी छ ।
आफ्नो परिचय, भाषा, संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै यो मुलुक अघि बढ्नेछ। यो मुलुकमा यति धेरै स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि पछि पर्नुमा अरू कसैलाई होइन, हामीलाई दोष जान्छ। यो मुलुक बनाउने जिम्मा हाम्रै हो।
‘मेरो कार्यकालमा लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा हुन्छ’
लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जन (भिक्षु निग्रोध)ले आफ्नो कार्यकालमा लुम्बिनी विकास गुरुयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘दुई वर्षपछि तपाइँको घरमा बत्ती जाँदैन’
हामीसँग भएका तामाकोशीलगायतका ठूला आयोजनाहरु २ वर्षभित्र पूरा हुन्छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु पनि बनेपछि वर्षाको लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ।
‘६० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचबाट बाहिर’
वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न अहिले बजारमा बढेको वित्तीय अपराधलाई रोक्नु पहिलो चुनौती हो।
अब अष्ट्रिचको बजारीकरण–शर्मा
संसारकै ठूलो चरा अष्ट्रिचको व्यवसायिक पालन गर्ने एकमात्र नेपाली सी पी शर्मा ।
‘राष्ट्र बैंकमा दबाब थेग्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ’
मेरो उपलब्धि मैले आफैं कसरी भन्ने ? समग्रमा वित्तीय स्थायित्व देखिने नीतिहरूबाट मात्रै हुने होइन । वित्तीय स्थायित्व सबभन्दा ठूलो विषय रहेछन्, सुशासनका सवालमा । सुशासन एकदमै सूक्ष्म हुन्छ । किनभने त्यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषको कामकारबाहीको प्रसंग आउँछ । सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारीका विषय आउँछन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) बडो जटिल हुँदोरहेछ ।
दोषारोपणभन्दा सहमति उपयुक्त : नेपाल
संवादहीनताको अवस्था आउनुमा कारण छन् । तर, म कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहन्नँ। तर, एउटा तथ्य के हो भने चार वर्षसम्म संविधान भन्दै त्यत्तिकै अल्झियौं। म त तीन महिनामा संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हुँ। अहिले र पहिले पनि संविधान निर्माणमा लागेको मान्छे हुँ। संविधानका आधारभूत कुरामा सहमति गर्नु मुख्य कुरा हो, बाँकी कुरा गर्न समय लाग्दैन। तर, अनावश्यक समय लिइयो। बहसै गरिरहने हो भने त जति पनि समय लाग्न सक्छ।
‘कृषि क्षेत्रका संभावना खोज्ने प्रयास’
यहाँ ४५ जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजका प्रर्दशनी हुनेछ यो नै आफैमा आकर्षण हो । यसको साथै कृषकका लागि उपयोगी कार्यक्रम पनि गर्दै छौ । जस्तो माटो विशेषज्ञबाट माटो परिक्षण गदैछौ । जुनसुकै कृषक दाजुभाइले आफ्नो खेतबारीको माटो कस्तो प्रकारको छ र यो मोटोमा के के लगाउदा राम्रो उत्पादन हुन्छ ? कुन तरकारी फलफुल तथा अन्नपात बढी उत्पादन हुन्छ ? माटो परिक्षण गरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैगरी अर्को कुरा हामी बोटविरुबाको स्वास्थ्य पनि परिक्षण गर्दैछौ । जसले गर्दा विरुबामा लागेको रोगको जानकारी हुन्छ । र अर्को कुरा उन्नत जातका बिउ बिजन पनि हामीले प्रदर्शनीबाटै बिक्री वितरण गर्दैछौ ।
अबको मिसन विश्वविद्यालयतर्फ
‘उदेश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेझै हामीले एउटा सुनौलो उद्देश्य लिएर होराइजनको स्थापना गरेका थियौं । हामीले यस क्षेत्रका विद्यार्थी र अभिभावकलाई जुन खालको विश्वास दिलाउन सक्यौं, त्यो अहिलेसम्म कायम रहेकोमा म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अब मलाई विश्वास छ, उहाँहरुले हामीलाई सधैभरि विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा हामीहरु आइपुगेका छौं । हामीले धेरै ठूला ठूला सपना बोकेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थियौं । एउटा सपना पूरा भएको घडीमा हामीहरु पुगिसकेका छौं । हामीले यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई विश्वका जुनसुकै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पुगेर पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र नाम कमाउनसक्ने अवस्थामा पु¥याइसकेका छौं ।
माघ ८ मा संविधान नआएपनि खासै फरक पर्दैन
पूर्वसभासद नीलाम्बर आचार्यको समय हिजोआज प्रायः राजनीतिक चिन्तनमा बित्ने गर्छ। उनलाई संविधानसभाले आफ्नो हैसियत एवम् अधिकारअनुरूपको कार्य सम्पादन नगरिरहेकोमा ठूलो चिन्ता छ। अनि राजनीतिक दल एवम् तिनका नेताहरूले जनतालाई दिएको वचनअनुरूप काम गर्न नसकेको या नगरेकोमा रोष उत्तिकै छ। नयाँ संविधान निर्माणका तगाराहरू के-के हुन्? दलहरूबीच कुरा के कारणले नमिलिरहेको हो?
‘लगानीको क्षेत्रहरु विस्तार गर्न सक्ने योजनाहरु आवश्यक’
साना तथा ब्यवसायीक कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं तर पनि ति क्षेत्रहरु जोखिम रहित क्षेत्र नभएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो लगानीलाई ब्यापक बनाउन सकिरहेका छैनौ । त्यसकारणले गर्दा लगानीको वातावरणलाई मूर्तरुप दिन सरकारले लगानीको क्षेत्रहरु विस्तार गर्न सक्ने किसिमले योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने थप आवश्यकता रहेको छ ।
राजस्व चुहावट देखे उजुरी गर्नुहोस् : अर्थमन्त्री
अर्थ मन्त्रालयले विश्वास दिलाउने काम गर्दै आएको छ । सदुपयोग गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको मात्रै होइन । अर्थ मन्त्रालयले रकम वितरण गर्ने मात्रै हो । सबै मन्त्रालय, विभाग र मातहतका सरकारी कार्यालयले इमानदारीपूर्वक सदुपयोग गर्नुपर्‍यो । खर्च गर्ने ठाउँमा अर्थ मन्त्रालय हुँदैन । मन्त्रालयहरूलाई रकम विभाजन र योजनाहरूलाई रकम दिन्छौँ । सदुपयोग गर्ने काम प्रत्येक निकाय, उपभोक्ता र नागरिकको पनि हो ।
परिश्रम अनुसारको फल जापानमा : गैरे
गोज एजुकेसन कन्सल्टेन्सी बुटवलमा खोल्नुको कारणहरु धेरै छन । यो यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट धेरै युवायुवतीहरु अध्ययनको लागि होस या रोजगारको लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा हामी गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएर आएका छौ । अहिले हामी जापानको लागि मात्र लक्षित छौ । हाम्रो चाहना कोही पनि विद्यार्थी नठगिउन् भन्ने हो । कठोर परिश्रम गरेर आफ्ना सन्तानलाई विदेश पढ्न पठाउन तयार अविभावकको रकम सहि ठाँउमा सदुपयोग गर्नकोलागि गोज एजुकेसन कन्सल्टेन्सी बुटवलमा आएको हो । यसको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा छ । अर्को कुरा हाम्रो बुटवल शाखा शतप्रतिसत रिजल्टका साथ संचालित छ ।
सहकारी पनि मर्ज गरे हुन्छ : थापा
सहकारी यति धेरै भए कि यसबाट सहकारीकर्मीले लिएको शिक्षा भन्दा विकृती धेरै हुन थाल्यो । किनकि धेरै बच्चा भएमा रेखदेख र स्याहार सुसार पु¥याउन नसकिए जस्तै निश्चित कर्मचारीले धेरै सहकारीहरुको नियमित अनुगमन गर्न सकिदैन जसले गर्दा सहकारी नजानेर दुर्घट्नातिर लम्किरहेको हुन्छ एकैचोटी दुर्घट्ना भएपछि मात्र जानकारी हुन्छ ।
अर्को कारण के हो भने बजारको क्षमता भन्दा बढि सहकारीहरु भएमा सहकारी संस्थाको वार्षिक आय भन्दा खर्च बढि हुन जान्छ जसले गर्दा सहकारी फस्टाउन सक्दैन बरु घाटा व्यवसाय तर्फ जान सक्छ । यसता केवल दिन धकल्ने र काल पर्खने सहकारी संस्थाले गर्दा अरु सक्षम र क्षमतावान राम्रो सहकारीलाई पनि केहि न केहि नकारात्मक असर पर्छ ।
नेपालमै सेवा गर्न मन छ : डा. धिताल
म त अहिले पनि हाम फालेर जान तयार छु। तर वातावरण त बन्नुपर्‍यो। नेपालमा गएर केही गर्ने वातावरण बनिसकेको छ जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि माध्यमबाट आफूले पाएको ज्ञान र सीपको माध्यमबाट केही मद्दत गर्न पाइन्थ्यो भने त्योभन्दा ठूलो खुसीको कुरा मेरो लागि केही हुँँदैन। म त भन्छु हामीमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ। यदि त्यस किसिमको वातावरण बन्यो भने म नेपाल जान तयार छु। मैले बेलायतमा रहँदा इटलीको एक टापुमा गएर मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपणसम्बन्धी हेल्थ क्याम्प चलाइसकेको छु।
संघको गरिमा उचो बनाउने नेतृत्व आओस् : श्रेष्ठ
म नेतृत्व हस्तान्तरणको संघारमा आएको छु । मैले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । मैले नेतृत्व लिइसकेपछि अब मैले नै नेतृत्व लिएर नेतृत्व लिन तयार भएका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुलाई मैले रोक्नुहुन्न । यसकारण संघका हरेक क्रियाकलापलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै, संघको भिजनलाई अरु उचाइँमा पुराउँदै, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो पहिचानलाई थप स्थापित गर्दै, युवा उद्यमीहरुलाई अगाडि बढ्नका लागि प्रेरणा र साहस प्रदान गर्दै सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने नेतृत्व आओस् भन्ने मेरो कामना छ ।
फुटवलर विमल भन्छन्–बुवाको कारण यहाँसम्म आएँ
विमल घर्ति मगर काठमाण्डौंमा भएको साफ च्याम्पीयनसिपमा पाकिस्तानसँगको भिडन्तमा वरावरीमा पुराउने फुटवल स्ट्राईकर हुन । नेपाली फुटवलमा छोटो समयमै सेलिब्रेटीसमेत भएका युवा स्ट्राईकर विमल अहिले नेपाली फुटबल क्षेत्रमा सवैभन्दा चर्चामा समेत छन् ।
सानै उमेरदेखी फुटवलमा रमेका विमल उमेर समुहका भरपर्दा खेलाडी समेत हुन् ।